An Asian Tour Operator: ဂျာကာတာ ခဏလေးများ
Traveling World is beautiful
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှော့ပင်ထွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာ၊ အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ အကောင်းဆုံး အစားအသောက် တွေရ နိုင်တဲ့ မြို့၊ ယဉ်ကျေးမှု့အမွေအနှစ် တွေနဲ့သမိုင်းဝင် အထိမ်းအမှတ်တွေ စုစည်းရာ ဌာန၊ ပူနွေးစိုစွတ် တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ကြပ်ညပ်နေတဲ့ လမ်းမ ကျယ်ကြီးတွေရဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပိတ်ဆို့ နေတာတွေကို စိတ်ရှည်သည်းခံ နိုင်မယ် ဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အကြီးဆုံး ဂျာကာတာ မြို့ ကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့ အနည်းဆုံး လည်သင့် တဲ့ နေရာ လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း မှာအလုပ်တာဝန် နဲ့ နေထိုင်စဉ် အတွင်း ဂျာကာတာ ကို အလုပ်ကိစ္စ အကြောင်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရောက်တဲ့ အခေါက်တိုင်း ၂၄ နာရီထက် ပိုပြီး မနေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အရှိန်အဟုန် နဲ့ ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက် နေတဲ့ ဂျာကာတာ ကို တွေ့ကြုံ ခံစား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ ဆယ့်သုံးသန်း ကျော် မှီတင်း နေထိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ မြို့တော် ဂျာကာတာ ဟာ သန်းပေါင်းများစွာသော ဆိုင်ကယ် တွေ၊ ကားတွေနဲ့ အမြဲ ရှုပ်ထွေး ပြည့်ကြပ်နေပြီး နေ့စဉ် နှင့် အမျှ လဲ ကျွန်းပေါင်း သောင်း သုံးထောင်ကျော်က ဒေသတွင်း ခရီးသွား တွေ စီးဝင် စီးထွက် နေရာ မြို့တော်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာကာတာ ကို မဖြစ်မနေ သွားရမယ့် ကိစ္စ တွေရှိလာတော့ ပထမ ဘာလီကျွန်းကနေ ဂီလီထရမ်ဝမ်ဂန် ဆိပ်ကမ်းကို ကိုယ့်ဖာသာ မောင်းသွား ပြီး အဲဒီကနေ မှ တဆင့် ဂီလီမာနောက် (Gilimanauk) ကို မော်တော်ကား တွေ ကွန်တိန်နာ တွေတင်တဲ့ ဇက်သင်္ဘောနဲ့ ဂျာဗားကျွန်း မကြီး ကိုရောက်၊ အဲဒီနောက် ဆူရာဗာရ (Surabaya) ကနေ တဆင့် ဆင်မာရမ် မြို့ (Semarang) မြို့ကို ဖြတ်ပြီး မြို့တော် ဂျာကာတာ အထိခရီးရှည် နှစ်ရက်ခန့် မောင်းပြီး နောက်တစ်နေ့ မှာ ဂျာကာတာ မှာလုပ်စရာ ကိစ္စ မှန်သမျှ လုပ်ပြီး အပြန်ကို တခြားဘက်က ပတ်ပြီး နာမည်ကျော် ဘန်ဒေါင်း (Bandung) နဲ့ ဂျိုဂျကာတာ (Yogyakarta) ကိုဖြတ်ပြီး ဂီလီမာနောက် ကနေမှ တဆင့် ဘာလီကို အပြန်ဖယ်ရီ ပေါ်ကို မောင်းတင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ပြန်မယ် ဆိုပြီး ကြံစည် ထားခဲ့ ပါတယ်။ရုံးက အော်ပရေးရှင်း မန်နေဂျာ ကာဒက် (Kadet) ကို လမ်းကြောင်း သေချာမေး၊ မြေပုံ နဲ့ သေချာ တိုက်ပြီး အလုပ်ကပေးထားတဲ့ တိုရိုတာ ဖိုးဝှီး ကို တောင့်တင်းအောင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းထားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမင့် တကယ်တမ်း သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခေါက်တိုင်းမှာတော့ Lion Air နဲ့ လေကြောင်းကချည်းသာ သွား ခဲ့ရပါတယ်။ မနက်စောစော သုံးနာရီလောက်ထ၊ ဒန်ပါဆာ (Denpasar) လေဆိပ်မှာ ကားရပ်ခဲ့ ပြီး အစောဆုံး လေယာဉ်နဲ့ ဂျာကာတာကို သွား၊ တနေကုန် လုပ်စရာ ရှိတာလုပ်၊ နောက်အကျဆုံး ဆယ့်တစ်နာရီလေယာဉ်နဲ့ ၊ ဘာလီကို ပြန်လာ၊ နောက်တနေ့မနက် နှစ်နာရီလောက် ပြန်ရောက်၊ မနက်ရုံး မှီအောင် တက်၊ အဲလိုချည်းသာ အခြေအနေအရ အလျဉ်မှီ စီစဉ် သွားလာခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်နာရီကျော် စီးရတဲ့ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ လေဆိပ်က မှီရာ ဘတ်စကားနဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေရှိရာ ဂျာကာတာမြို့လည်ခေါင် (Pusat Jakarta - Jakarta City Center) ကို (ကားမပိတ်ရင် တစ်နာရီခန့်၊ ကားကြပ်ရင် မခန့်မှန်းနိုင်) စိတ်ရှည်သည်းခံ ပြီး ရောက်အောင် သွားရပါတယ်။ ပထမ အခေါက်တွေက အမြန်ရောက်ချင်ဇောနဲ့ တက္ကစီ စီးခဲ့ ပေမယ့် ဘတ်စကား နဲ့ ရောက်ချိန် သိပ်မကွာဘူး ဆိုတာ နောက်ပိုင်းမှာ သိလာခဲ့ရလို့ ဘတ်စကားပဲ စီးပါတော့တယ်။ အမျိုးသားကျောက်တိုင်ရှိရာ မြို့လည်က ပြည်သူ့ ရင်ပြင် (Merdeka Square) ၀န်းနားက ဘတ်စ်စတေရှင် ကနေ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် ဒါမှ မဟုတ် ဆိုင်ကယ် တက္ကစီနဲ့ အလုပ်ကိစ္စရှိတဲ့ နေရာ ကို ခရီးဆက်ရပါတယ်။ဂျာကာတာ ဟာ ဖွံ့ဖြိုးတက်မှု့ နဲ့ စီးပွားရေးရာ တောင့်တင်းမှု့ကို အဆင့်မြင့် ရှော့ပင်းစင်တာကြီးတွေနဲ့ တင် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ ဒေသခံ အင်ဒိုနီးရှန်း တွေရဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်စွမ်း (purchasing power) ကို သိသာထင်ရှားစေပြီး ဈေးနှုန်းနဲ့ ရွေးချယ် စရာ ပေါများ မှု့ တွေက တော့ ဒေသတွင်းက စင်္ကာပူ၊ ကွာလာလမ်ပူ နဲ့ ဟောင် ကောင် တို့ ကိုယှဉ်နိုင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ပလာဇာအင်ဒိုနီးရှား (Plaza Indonesia) ဟာ ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့ တဲ့ နေရာဖြစ်ပြီး ဂျာကာတာ ရှော့ပင်းစင်တာတွေထဲ မှာ ဥပမာ ပြစရာ ပုံသက်သေကောင်းပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ အကောင်းဆုံး ရှော့ပင်းစင်တာတွေထဲ ကတစ်ခုဖြစ်ပြီး (Gucci, Georgio Armania, Bvlgaria) စတဲ့ နာမည်ကြီး (luxury brands) တွေ အပြင် ကမ္ဘာကျော် အင်ဒိုနီးရှား ပါတိတ်တွေ ကိုလဲ ခေတ်မှီ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုး နဲ့ တီထွင် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေလဲ များစွာ တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း သွားခဲ့ တဲ့ အခေါက်တွေမှာ ရှော့ပင်းစင်တာ တွေ ကို စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် မိသားစု နဲ့ ရောက်ခဲ့ တဲ့ အခါ မှာတော့ ခြေတို လာလို့ လော်ဘီ မှာ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်သလို ထိုင်စောင့် ခဲ့ရပါ တယ်။ ခြေတို သက်သာပေသော်ငြား စောင့်ရ မျှော်ရလွန်းလို့ လည်ပင်း တော့ နည်းနည်း ပိုရှည်လာလိမ့်မယ် တော့ထင်ပါတယ်။ဂျာကာတာ မှာ အင်ဒိုနီးရှား ရဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေ အနှစ်တွေ လေ့လာ ခံစား နိုင်မယ့် နေရာ မိုနာ့ စ် (Monas) ကိုမရောက်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ ဂျာကာတာ ကိုရောက်ခဲ့ တယ်လို့ ပြောရမှာ တော်တော် ခက်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ မိုနာ့စ် ဆိုတာ အင်ဒိုနီးရှား ဆိုတာ ဖြစ်လာအောင် တိုက်ခိုက်ရယူလို့ အောင်မြင်မှု ရခဲ့ တဲ့ အထိမ်း အမှတ် ကျောက်တိုင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုနာ့စ် ဆိုတာကလဲ ဘာဟာဆာ အင်ဒိုနီးရှား လို အတို ကောက် (Monumen Nasional - Mo Nas) ခေါ်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးရာလေးဆယ့် သုံးပေ မြင့်တဲ့ မိုနာ့စ် ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ သမ္မတကြီး ဆူကာနို ရဲ့ ညွှန်ကြား ချက်နဲ့ ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ အများ ပြည်သူ လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ရန် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းမှာ ဟိန္ဒူဧကရာဇ် မဂျပထစ် (Majapahit) ကစပြီး လွတ်လပ်သော အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ အဖြစ် ရင့်ကျူး နိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ အထိ အင်ဒိုနီးရှား ရဲ့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှား လာခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်း ကို ပုံတူ သေသေး ကလေး တွေ နဲ့ ပြကွက် တစ်ခုခြင်း၊ တစ်ခန်း ခြင်း အသေးစိပ် ပြထားပြီး အင်္ဂလိပ်၊ ဘာဟာဆာ အင်ဒိုနီးရှား နှစ်ဘာသာ နဲ့ ရေး ထားတဲ့ ကြေးပြား လေးတွေ တစ်ခန်းခြင်း စီမှာ ကပ်ထားပါတယ်။မိုနာ့စ် အပေါ်ကို မတက်မှီ အောက်ထပ် က အလင်းရောင် မှိန်မှိန်နဲ့ ခန်းမကျယ်ကြီး က ပြခန်း ပြကွက်တွေကို တစ်ခုခြင်း၊ တစ်ခန်းခြင်း အသေးစိပ် ဖတ်နေမယ် ဆိုရင် တစ်နေကုန် လောက် ကြာ နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပြတိုက် တို့ ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အုပ်စုတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး ဒေသတွင်း ခရီးသွား တွေလဲ တဖွဲဖွဲ လာလေ့လာ ကြည့်ရှု့ နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ မိုနာ့စ် ရဲ့ အပေါ်ထပ် (Observation Deck) မှာတော့ မြို့တော် ဂျာကာတာ ရဲ့ ရှုခင်း ကို မြင်ကွင်းကျယ် ခံစား နိုင်မှာပါ။ ပူအိုက် စိုစွတ်လှတဲ့ ဂျာကာတာ ရဲ့ ရှုခင်း ကို ထောင့် အမျိုးမျိုးကနေ ချွေးတလုံး လုံး နဲ့ ဓါတ်ပုံ ဗွီဒီယို ရိုက် နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွား တွေလဲ မနည်းလှပါဘူး။တစ်ခေါက်မှာ မိုနာ့စ်က အပြန် ပါဆာဘာရူး (Pasar Bharu - New Market) ကို သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် နဲ့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်း တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်း တန်းတွေကို လူရှုပ်ရှုပ် ကို ဆန်ပြီး ဖြတ်အပြီး မှာ ဂျာကာတာ ရဲ့ ရုံးကန် လှုပ်ရှား နေရသူ အခြေခံ လူတန်းစား တွေရဲ့ ဘ၀ကို တစ်စိတ် တစ်ဒေသ မြင်သာ နိုင်ပါတယ်။ မိုးမျှော် တိုက်ကြီးတွေ၊ အဆင့်မြင့် ရှော့ပင်းစင်တာကြီး တွေ၊ အကောင်းဆုံး စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေ၊ ကြယ်ငါးပွင့် ဟော်တယ်ကြီး တွေကို နောက်ဆုံးပေါ် ဇိမ်ခံကား မျိုးစုံ နဲ့ သွားလာစား သောက် နေနိုင်တဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိသလို ကြိုက်လွန်းလှတဲ့ ကိုပီဂျာဟေး (Kopi Jahe - ဂျင်းနံ့ ပါတဲ့ ကော်ဖီ) ကို တစ်ထုပ် ရူပီးရား နှစ်ထောင် (မြန်မာငွေ နှစ်ရာကျပ်ခန့်) ကို မကြာခဏ မသောက် နိုင်တဲ့ သူတွေ နဲ့ လဲ တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်။ ကျနော် Grand Hyatt ဟိုတယ် လော်ဘီ အပေါက်နားမှာ ဆေးလိပ်သောက်နေတုန်း နောက်ဆုံးပေါ် ကားအမျိူးမျိူး မောင်းဝင်လာပြီး ဟိုတယ် ၀န်ထမ်းကို ကားသော့ ပစ်ပေး ပြီး ၀င်သွား တဲ့ ချမ်းသာသူ လု့ မလိုင်များ စွာ ကို တွေ့ ခဲ့ရသလို၊ သံချိတ် အကောက် တတ်ထားတဲ့ တုတ်တစ်ခြောင်း ကိုကိုင်ပြီး ဆာလာအိပ် အကြီးကြီး ထဲမှာ ပလတ်စတစ်၊ သံတိုသံစ စတာ တွေ လိုက်ကောက် နေတဲ့ ဒေသခံ ကြီးကြီး ငယ်ငယ် တွေကို လဲ တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။ပါးမှာ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားနဲ့ ပေါင်မှာ သေးစီးကြောင်း နဲ့ လုံမငယ် လို မိုးမျှော်တိုက်တာ အဆောက် အအုံကြီးတွေ၊ စီးပွားရေးစင်တာ ကြီး တွေ ရဲ့ ပြင် ပမှာ ဂျာကာတာ မြို့ ကို ပါတ်စီးနေတဲ့ ရေဆိုးထုပ် မြောင်းကြီး ဟာ မြစ်ကြီး တစ်စင်းလို ဖြစ်နေပြီး အမှိုက်သရိုက် ပလတ်စတ် တွေနဲ့ ပေါလော ပေါ် နေတာကိုလဲ မသတီစရာ တွေ့ မြင်နိုင်ဦးမှာပါ။ အခြေခံ နဲ့ အလယ် အလတ်တန်းစား တွေအားကိုးရတဲ့ ဘတ်စကား မှတ်တိုင် တွေမှာ လူတွေ စုပြုံ တိုးအုံ နေလေ့ရှိပြီး ဂျာကာတာ ရဲ့ ဆင်ခြေဖုန်း တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘိုဂိုး (Bogor)၊ တင်ဂါရန် (Tingaran) စတဲ့ မြို့ငယ်လေးတွေ နဲ့ သွားလာ ချိတ်ဆက် မယ့် လူတွေ နဲ့ ဂျာကာတာ တီမော၊ ဘာရတ်၊ ဥတရ၊ ဆယ်လာတန် (Jakarta - Timor, Barat, Utara, Selatan - ဂျာကာတာရဲ့ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်) ကို သွားလာ ကြမယ့် သူတွေ ဒွေးရော ယှက်တင် ရှိပါလိမ့်မယ်။တစ်ခေါက်မှာ တော့ မနက် ကိုးနာရီ ကျော်ခန့် အလုပ်ကိစ္စရှိတဲ့ ရုံးတစ်ရုံး ကိုရောက်တော့ သူတို့ ရုံး က မဖွင့် သေးပါဘူး။ ခက်တာက ကိုယ့် မှာ ကလွယ်မထား အပ်တဲ့ ပြဿနာ မကြာခင် ပေါက်ကွဲ တော့ မယ့် အခြေ အနေ ဆိုတော့ အဲဒီရုံး က လုံခြုံ ရေး အစောင့် ကို ကိုး နာရီကျော် နေသည့် တိုင် မဖွင့် သေးတဲ့ အကြောင်း စိတ်မရှည် တဲ့ လေသံ နဲ့ အပြစ်တင် ပြေဆိုမိပါတယ်။ အမှန်က ဂျာကာတာ နဲ့ ဘာလီ စံတော်ချိန် မတူပဲ တစ်နာရီတိတိ ကွာ တာ ကို ကျနော် မေ့နေတာပါ။ ခက်တာ က သူ့ နေနဲ့ လဲ ဖွင့် ပေးလို့ မရပါဘူးတဲ့။ တိုးအော်ပရေတာ ဆိုတာ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသက ဟော်တယ် မဆို ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် သလို မျိုး ဆိုတော့ အနီးဆုံး ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်၊ ဟိုတယ် နီကိုး (Hotel Nikko - Pusat Jakarta) ကိုပဲ အမြန်ဆုံး နည်းနဲ့ သုတ်ခြေတင် ရပါတယ်။ ကိစ္စပြီး မှ အပွိုင့်မင့် ရှိရာ စောစောက ရုံး ကို ပြန်ပြေးရပါတယ်။ အဲဒီတစ်ခေါက် အဆိုပါ ရုံး က အပြန်မှာ ရိုဂျာ့ (Malay / Singapore - Rojak: Indonesia - Rujak) တစ်ပွဲစား၊ ရေသန့် ဘူးကြီးကြီး ၀ယ်ပြီး ယခု လက်ရှိ အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်ဟူစိန်အိုဘားမား (President Barack Hussien Obama) တက်ခဲ့ရာ မူလတန်း ကျောင်းကလေး ကို ကြည့်ချင် လို့ ပြင်းထန် တဲ့ နေရောင်အောက် မှာ နာရီဝက်ကျော် လမ်းလျှောက် ပြီှးရှာ ခဲ့ရပါတယ်။အစက တော့ ဘာရက်အိုဘားမား ကလေး ပုံ ကြေးရုပ်ကို မန်တန် ပန်းခြံ (Menteng) မှာ ထားခဲ့ ပေမယ့် နောက် ပိုင်း မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် သူငယ်ငယ် က တက်ခဲ့ ရာ မူလတန်း ကျောင်း ကိုပြောင်းရွှေ့ ခဲတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာရက်အိုဘားမား ဟာ ဖရန်စစ်ကန် အစစ်စီ မူလတန်းကျောင်း (Franciscan Asisi Primary School) မှာ ဘာရီဆိုတိုရိ (Barry Soetoro) ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ ၁၉၆၈ ခုနှစ် ကျောင်း အပ်ခဲ့ ပြီး သုံး နှစ်တိတိ တက်ခဲ့ ပြီး မိဘတွေ အိမ်ပြောင်းရွှေ့ တဲ့ အတွက် ယခု ဘာဆုကီ အလယ်တန်းကျောင်း (Besuki 01 Elementary School, Menteng) မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဟာဝိုင်ယီ ကို မပြောင်းရွှေ့ ခင် အထိ တစ်နှစ် တက်ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အိုဘားမား တက်ခဲ့ တဲ့ ကျောင်း ကလေး က အပြန်မှာ ညနေ စောင်း နေပေမယ့် နေရှိန် ကတော့ မကျ သေးပါဘူး။ လမ်း အကြာ ကြီး လျှောက် ခဲ့ ရလို့ ပင် ပန်း နေတဲ့ ကျနော် ဟာ ကျောင်းလမ်း ထိပ်က ဆိုင်ကယ် တက္ကစီ ကိုငှား ပြီး လေဆိပ် ကို သွားတဲ့ ဘတ်စတေရှင် ကိုသာ ငှားလိုက်ပါတော့ တယ်။အမှန်တကယ် တော့ မြို့တော် ဂျာကာတာ ဟာ ရက် အနည်းငယ် အချိန်ပေးပြီး လည်ပတ်မယ် ဆိုရင် အပိုင်း (၃) ပိုင်း ပိုင်း ပြီး လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်း အဆောက် အအုံတွေ၊ ဗလီ တွေ နဲ့ ခရစ်ယန် ဘုရားရှိခိုးကြီး တွေ ကို တစ်ပိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု့ အမွေ အနှစ် တွေ ကို ပြခန်း၊ ပြတိုက် တွေမှာ လေ့လာဖို့ က တစ်ပိုင်း ထားပြီး ကျန်တဲ့ အပိုင်းကို တော့ ရှော့ပင်၊ စားသောက် ဆိုင်တွေ နဲ့ အပန်းဖြေ ပန်းခြံ၊ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် တွေ ကို တစ်ပိုင်း ဆိုပြီး လမ်းသင့် သလို အချိန်ရှိသမျှ လေးကို စီမံ ခန့် ခွဲပြီး လေ့လာသင့် တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ဂျာကာတာ မှာ ဆုမတြား ကနေ အနောက် ပါပူးဝါး အထိ ကျွန်းပေါင်းစုံ က လူတွေကို သွင်ပြင် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားစွာ တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာကာတာ က လူတွေ ပြောတဲ့ အင်ဒိုနီးရှန်း ဟာ အရမ်းမြန်ပြီး အင်ဒိုနီးရှန်း နဲ့ ဂျာဗား စကား ရောယှက် ပြီး ပြောတာ ဖြစ်လို့ ကျနော့် အတွက် နားလည်ဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ ရှော့ပင်းစင်တာ တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှန်း တွေဟာ တီဗွီဇာတ်လမ်းတွေထဲ ကထက် ပိုပြီး သန့် ပြန့်ချောမော ကြပါပေတယ်။ ဆင်ခြေဖုံး ကလူ တွေ ကိုလည်း ဇာတ်လမ်းတွေ ထဲမှာ ထက် ပိုပြီး ခက်ခဲ စွာ အပမ်းတကြီး ရုန်းကန် နေရတာ ကို မမျှ မတ တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ပြည်တွင်း လေကြောင်း တွေရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း သတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်ကျပြီး မှ ဘာလီ ကိုပြန်ရောက် လာတဲ့ ကျနော်ဟာ (အခေါက်တိုင်းလိုလို) နောက်တစ်နေ့ မနက် နှစ်နာရီမှ သာ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ပါတော့တယ်။ ဂျာကာတာ ကိုရောက် ခဲ့ တဲ့ ခဏတာ လေး တွေဟာ အပူနဲ့ အအေး၊ အမြင့် နဲ့ အနိမ့်၊ ချမ်းသာ ခြင်း နဲ့ ဆင်းရဲခြင်း တွေကို တပြိုင် နက်ထဲ ခံ စားလိုက် ရတဲ့ အိမ်မက် ဆန်ဆန် ဖြစ်ရပ်တွေ ချည်း သာ စိတ် အမြင် မှာ စွဲ ထင်နေပါတော့တယ်။ ။၀ိဟာရမဟာဝိဟာရ ဂရဟ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း (ဘတ်စကားပေါ်မှ AATO)ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံး - ဂျာကာတာ (AATO)ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံး - ဂျာကာတာ (AATO)ဂျာကာတာဆင်ခြေဖုံး (ဘတ်စကားပေါ်မှ AATO)ဂျာကာတာမြို့လည်တစ်နေရာ (လူကူးကုန်းကျော်တံတားပေါ်မှ AATO)ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ ဂျာကာတာ မှာရိုက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံ တွေ အများစု က မှားပြီး ဖျက်မိသွားလို့ ဘာမှ မကျန်တော့ ပါ။ သို့ ပေမယ့် ကွန်မန့် ပေးလာတဲ့ ဦးပေါက်စ ကိုကျေနပ် စေချင်လို့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ အထဲ က ရှိတာလေး တွေတင်လိုက် ပါတယ်။ ပြည့်စုံ သွားလိမ့် မယ်လို့တော့ မထင်ဝံ့ ပါ။updated 30th March 2012: AATOPhotos:- Monas - Warsi - Jakarta Macet - Jarkarta Post- Cock - (JP/ID Nugroho) Jakarta Post - Plaza Indonesia - Hkurniawan dari Wikitravel- Barack Obama Statue - (Jakarta Post, Feb. 24, 2010)
3/29/2012 01:02:00 PM
ဓါတ်ပုံ များများလေး တင်နိုင်ရင် ပိုပြည့်စုံသွားမယ်။
2:07 PM, March 29, 2012
10:23 PM, March 30, 2012
10:27 PM, March 30, 2012
ကိုအေအေတူအို ရေအရေးကောင်းတာနဲ့ သွားတောင်လည်ချင်လာပြီ အိုဘားမား ရဲ့ ကျောင်းလေး ကို ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ဘူးလား ကျေးဇူးပါခင်မင်စွာဖြင့်ရွှေစင်ဦး
11:58 PM, March 30, 2012
စိတ်ဝင်စားစရာ နေရာတွေများတယ်နော်... ရောက်ဖူးချင်သေးတယ်မရောက်ခင်တော့ ပုံတွေကြည့်ပြီး စိတ်ဖြေသွားရတယ်ပေါ့လေ အိုဘားမားနေခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာတက်ချင်ထှာသူ့လို သမ္မတများဖြစ်မလားလို့း))
12:37 AM, April 01, 2012
သွားချင်လိုက်တာ။ နောက်ပေါ့. . .. :)
ရောက်ဖူးချင်တဲ့အထဲမှာ ဂျာကာတာလည်း ပါတယ်.. ခင်မင်လျှက်ဆောင်းနှင်းရွက်
4:25 PM, April 07, 2012
အဲဒီ မြို့ပြ လူပင်လယ်ကြီးထဲကို တိုးဝင်ကြည့်ချင်သေးတယ်။ ကြုံကြိုက်လို့ ဂျကာတာကို ရောက်ဖြစ်ရင် ကို AATO တင်ထားတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို သတိရမိမယ် ထင်ပါရဲ့။
2:31 AM, May 10, 2012
6:31 PM, July 03, 2012
Hi, very Interesting blog you have here... It would be my pleasure if you visit my website too. Here's the link http://ads.com.mm/?cid=4fe2db67e4b0d19a0f5e0b1e&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_riche&utm_so
3:15 PM, July 26, 2012
LicenseThank you very much for visiting my blog. I really do. I am trying to write and share my knowledge, experience,information etc etc. I would be very much appreciated for your either encouraging or critical comments to my any post. Furthermore, some photos herein the posts are not mine and perhaps some information too. However I always try to credit or mention the courtesy of the respective owner and/or where I got it from. Anyway please leave your message anything regards to my blog or if you want to use any part of information from my blog. I would follow up thereafter your message, accordingly.Contact: thomasjrlatt@gmail.com
An Asian Tour OperatorLocation: Roaming AsiaCurrent Location: Bali, IndonesiaEmail: thomasjrlatt@gmail.com
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင် သို့အလည်တစ်ခေါက် ၁
စင်ကာပူတွင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ နေထိုင်ခွင့် ရုပ်သိမ်းမည်ဆိုခြင်းသည် မြန်မာကျောင်းသားများ အတွက် ကန့်သတ်ချက်များ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သိရှိရ